AR.js mitondra zava-misy marobe amin'ny tranonkala maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
AR.js hitondra zava-misy marobe amin'ny tranonkala
Manuel Ramirez | | teknolojia, maro
Efa fantatsika fa rehefa mandeha ny teknolojia hitantsika amin'ny fandaharana samihafa na lalao video dia ireto avy eo mandehana amin'ny tranonkala hanolotra traikefa hafa mpampiasa hafa. Ity ny tranga Ar.js izay tonga hitondra ny zava-misy mitombo amin'ny tranonkala.
AR.js dia novolavolain'i Jerome Etienne niaraka tamin'ny tanjon'ny famelomana ho an'ny rehetraamin'ny fampitomboana ny zava-misy. Ny iray amin'ireo tanjany dia ny fanatsarana ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny tena zava-misy amin'ny finday, noho izany dia hita amin'ny zana-kazo 60 isan-tsegondra amin'ny telefaona izy telo taona lasa izay.
Fanatsarana mba ahafahana mampihatra an'io tranomboky io amin'ny tetikasa vaovao izay manararaotra ireo toetra tsara sy tombontsoa azo avy amin'ny zava-misy nampitomboina. Miatrika a vahaolana tranonkala madio amin'ny AR.js, ka miasa amin'ny telefaona misy amin'ny WebGL sy WebRTC.
Ny iray amin'ireo fiasa lehibe indrindra amin'ny AR.js dia izy io loharanom-baovao misokatra ary maimaim-poana izany, noho izany dia misy ho an'ny mpikirakira rehetra manararaotra eo noho eo. Ny tena tsara indrindra, ny AR.js dia mamela anao hiditra amin'ny AR tsy mila mametraka apetraka fanampiny ary tsy mila mividy fitaovana.
Izay manana fitaovana ampiasana AR dia afaka mankafy ny traikefa AR.js. AR.js, indrindra, miankina amin'ny fahombiazana sy ny fahatsorana. Ary miresaka momba ny zava-misy isika fa ny realité augmented dia azo alamina amina andalana HTML 10 fotsiny.
Izany indrindra no antony mihabetsaka ny mpamorona efa manakaiky ny AR.js, ka tsy ho ela intsony dia hahita traikefa bebe kokoa amin'ny Internet miaraka amin'ity tranomboky ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » AR.js hitondra zava-misy marobe amin'ny tranonkala
Fisamborana an'io segondra io izay tapaka ny onja mba hamadika azy ho zavakanto
13 Mpikaroka daty maneho hevitra tena tsara natao